सुनको मूल्य फेरी बड्यो ,आजमात्रै तोलामा रु. ८०० ले बृदी - Nepal Bizz
सुनको मूल्य फेरी बड्यो ,आजमात्रै तोलामा रु. ८०० ले बृदी
Posted on १२ भाद्र २०७६, बिहीबार ११:४८ Author admin	Comment(0)
काठमाण्डौ । सुन तोलामा बिहीबार फेरि एकैपटक ८०० रुपैयाँले बढेको छ
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपाली बजारमा बिहीबार छापावाला सुन प्रतितोला ७३ हजार ४०० रुपैयाँ र तेजाबी ७३ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सुनको भाउ मंगलबार तोलामा ९०० रुपैयाँले घटेर छापावाला सुन ७२ हजार ६०० र तेजाबी सुन ७२ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । हिजो बुधबार भने सुनको भाउ स्थिर रहेको थियो ।
यो साता कारोबारको पहिलो दुई दिनमै सुन तोलामा २ हजार २०० रुपैयाँले बढेको थियो । जसअनुसार तोलामा सोमबार एकैपटक १ हजार रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाला सुन ७३ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७३ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको छ। यो नेपालकै इतिहासमा हालसम्म उच्च मूल्य हो ।
त्यस्तै आइतबार पनि एकै दिन तोलामा १ हजार २०० रुपैयाँले सुनको भाउ बढेको थियो । बजारमा आइतबार छापावाला सुन तोलाको ७२ हजार ५०० र तेजाबी सुन तोलाको ७२ हजार २०० मा कारोबार भएको थियो ।
Posted on १२ आश्विन २०७६, आईतवार ११:५० Author admin
Posted on ७ आश्विन २०७६, मंगलवार ११:०८ Author admin
काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को गत माघदेखि असारसम्मको ६ महिनाको अवधिमा ओभर द काउन्टर (ओटीसी) बजारमा १ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ३३ हजार ४१४ रुपैयाँको कारोबार भएको छ । ओटीसी बजारबाट कारोबार बढाउने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमिसन घटाउन थालेपछि ओटीसी बजारमा कारोबार बढ्न थालेको छ । जुनसुकै कारोबारमा डेढ प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्थालाई […]
Posted on ६ आश्विन २०७६, सोमबार ०७:२० Author admin
काठमाडौं , अशोज6. दशै नजिक आउदै गर्दा बजारमा महंगी बढ्दै गयकोछ। अत्यआवश्यक पर्ने तरकारीको मूल्य अत्यधिक रुपमा बढेको छ । आलु, प्याजलगायतका तरकारीको मूल्य आम नेपालीले धान्न नसक्ने गरी बढेको हो । सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन नगर्दा व्यापारीले विभिन्न बहानामा तरकारी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका हुन् । एक साताअघि ९३ प्रतिकिलो […]
आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुनौलो बनौन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् अब यी तरिका ।